Onye okike nke 'The Watchmen' Alan Moore's 'The Show' bụ mkpokọta Mindbender ma na -aga Blu -Ray - iHorror
Mbido Blu ụzarị Onye okike nke 'The Watchmen' Alan Moore's 'The Show' bụ Total Mindbender ma na-aga Blu-Ray
Onye okike nke 'The Watchmen' Alan Moore's 'The Show' bụ Total Mindbender ma na-aga Blu-Ray
Ị nwere anyị na Alan Moore
by Trey Hilburn III September 13, 2021 305 echiche
Ndị nche bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ kacha mma edere. Ha bụ ọkaibe zuru oke. Akwụkwọ na -esochi na -eduga na HBO Ndị nche usoro a bụ ọkaibe na mmeri ha n'ụzọ n'ụzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ were ọdịnaya mbụ. Ugbu a, onye amamihe nke oge anyị, Alan Moore nwere ihe nkiri ọhụrụ n'ụzọ akpọrọ, The Gosi. Otu lelee teaser a, ị ga -abanye n'ime ụwa nke ọkụ na -enwu gbaa nke na -echere.
Na nchịkọta akụkọ maka The Gosi na-aga dị ka nke a:
Fletcher Dennis (Burke), nwoke nwere ọtụtụ onyinye, akwụkwọ ikike ngafe na njirimara, rutere Northampton - obodo dị egwu na ihe egwu dị na etiti England dịka ọ dị. Na ebumnuche ịchọta ebe ezuru ohi maka onye ahịa ya na -eyi egwu, Fletcher hụrụ onwe ya ka ọ na -etinye onwe ya n'ime ụwa gbara ọchịchịrị nke nwere vampires, ịma mma ihi ụra, ndị omempụ Voodoo, anya nzuzo nke ndị nkịtị, na ndị na -abọ ọbọ. Ọ na -emikpu ngwa ngwa banye n'ime oghere ojii dị egwu ma dị egwu, nke zoro n'okpuru elu obodo a yiri ka ọ dị jụụ. N'oge na -adịghị anya Fletcher ga -achọpụta na nrọ na eziokwu emebisịla na ọ nweghịkwa ike ịbụ ezigbo ụwa ịlaghachi na… Nnọọ na Ngosipụta.
Mitch Jenkins duziri ya The Gosi bụ kpamkpam otu iberibe aka. O juputara n'akụkụ onye ọbịa Moore, ọ bụkwa otu n'ime ihe nkiri ahụ na -arịọ ka a hụ ya ugboro ole na ole.
Ihe pụrụ iche maka Ihe ngosi ahụ blu-ray na-abịa gụnyere ihe nkiri na-adọkpụ, “Gosi Pieces ihe nkiri dị mkpirikpi mbụ” na “Nnọọ na ngosi ngosi,” nke gụnyere ajụjụ ọnụ pụrụ iche Alan Moore na Mitch Jenkins.
The Gosi na-abịa na blu-ray malite na Nọvemba 23 na dijitalụ na On Demand malite na Ọkt. 5.
Ị bụ onye na -akwado Alan Moore? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa.